Shir looga hadlayo sidii loo amba-qaadi lahaa Wadahadalada DFS iyo Somaliland oo Muqdisho ka furmay. By WMA -22nd December 20190 - Awdinle Online
Shir looga hadlayo sidii loo amba-qaadi lahaa Wadahadalada DFS iyo Somaliland oo Muqdisho ka furmay. By WMA -22nd December 20190
December 22, 2019 (Awdinle Online) –Shir looga hadlayo sidii loo amba-qaadi lahaa wadahadallada Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland ayaa maanta waxaa uu ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb-galay waxgarad matalaya Somaliland iyo guddiga dhab u heshiisiinta ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Mas’uuliyiinta ka qeyb gashay shirka ayaa lagu wadaa in ay is dhaafsaday aragtiyo ku aadan sidii wada-hadalladaas loo amba-qaadi lahaa, isla markaana loo dhameyn lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Somaliland.
Mudo badan ayey hakad ku jireen wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo ay soo anba qaaday dowladdii tan ka horeysay, waxaana hadda saluug laga muujinayaa sida ay u dhaqan gali doonaan dadaalada dib loogu soo nooleynayo wadahadaladaas, maadaama intii xukuumadani jirtay aan talaabo ku saabsan wadahadaladaas horay loo qaadin,haatana waqti kooban uu haray Mudo xileedkooda.
Xubnaha Guddiga dhab u heshiinta oo dhawaan kulan la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa loogu baaqay in ay dardargaliyaan wada hadala u dhexeeya Dowlada Soomaaliya iyo Somaliland.
Previous articleDHAGEYSO:-Faysal Cali Waraabe: “Runtii wax na looga sheekeynayo ma ahan wax caasimadda Hargeysa ka jira
Next articleKheyre oo la kulmay Wafdigii Soomaaliland